Fanabeazana momba ny fitiavana momba ny fitiavana | Valin'ny Fanamarinana
Home Momba anay
Ny Reward Foundation dia fiantrana fanabeazana maharitra izay mijery ny siansa ao ambadiky ny firaisana sy ny fitiavana. Ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha dia nivoatra hitondra antsika amin'ny valisoa voajanahary toy ny sakafo, ny fatorana ary ny firaisana. Ireo rehetra ireo dia mampiroborobo ny fahavelomantsika.
Androany, ny teknolojia dia namokatra kinova 'supernormal' amin'ireo valisoa voajanahary amin'ny endrika sakafo tsy fanao, media sosialy ary sary vetaveta amin'ny Internet. Ny atidohantsika dia tsy nivoatra hiatrehana ny fanamafisana naterak'izany. Ny fiarahamonina dia miaina areti-mifindra amin'ny fikorontanana amin'ny fitondran-tena sy ny fiankinan-doha mandrahona ny fahasalamantsika, ny fivoarantsika ary ny fahasambarantsika.
Ao amin'ny Foundation Reward dia mifantoka amin'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto izahay. Mijery ny fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fifandraisana, fahombiazana ary heloka bevava. Ny tanjonay dia ny hahatonga ny fikarohana fanohanana ho an'ny tsy mpahay siansa. Tokony ho afaka manao safidy tsara momba ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet ny olon-drehetra. Hitanay ny tombotsoan'ny fialana vetaveta mifototra amin'ny fikarohana sy ny tatitra momba ireo efa nanandrana nandao azy io. Ao amin'ny The Reward Reward dia hahita tari-dalana amin'ny fananganana ny faharetana amin'ny fihenjanana sy ny fiankinan-doha.
We are registered charity Scottish at 23 June 2014.
Finday: 0750 647 5204 sy 07717 437 727
Ity ny ekipanay mpitarika ankehitriny.
Dr Darryl Mead no tale jeneralin'ny The Reward Foundation. Darryl dia manam-pahaizana amin'ny Internet sy ny vanim-potoanan'ny fampahalalana. Nanangana ny Internet ho an'ny daholobe maimaimpoana voalohany tany Scotland izy tamin'ny 1996 ary nanoro hevitra ny governemanta Scottish sy UK ny amin'ny fanamby amin'ny fifindrana mankany amin'ny fiarahamonina nomerika. Darryl dia mpiara-miasa amin'ny Chartered Institute of Library and Information Professionals ary Associate Research Associate ao amin'ny University College London. Tamin'ny volana novambra 2019 i Darryl dia namarana ny asany tamin'ny naha talen'ny birao an'ny The Reward Foundation ary lasa Chief Executive Officer anay.
Anisan'ny mpikambana ao amin'ny birao…
Mary Sharpe, Mpanolotsaina, dia efa filohanay nanomboka ny Novambra 2019. Hatramin'ny fahazazana Maria dia talanjona amin'ny herin'ny saina. Miantso ny traikefany matihanina, fiofanana ary ny vatsim-pianakaviana izy hanampy ny The Reward Foundation hamaha ny tena olana momba ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo ary ny Internet. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny bokotra Mary Eto.
Anne Darling dia mpanoro hevitra momba ny fampiofanana sy sosialy. Manolotra ny fampiofanana ho an'ny ankizy amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatra fanabeazana ao amin'ny sehatry ny sekoly tsy miankina izy. Manolotra ny fotoam-pivoriana amin'ny ray aman-dreny ihany koa i Anne amin'ny lafiny rehetra amin'ny Internet Safety. Izy dia ambasadaoron'ny CEOP ao Ekosy ary manampy amin'ny famoronana ny programa "mitandrina ny tenako" ho an'ny ankizy madinika.
Mo Gill dia nanatevin-daharana ny biraony tamin'ny 2018. Izy dia manam-pahaizana ambony momba ny HR, manam-pahaizana manokana momba ny asa, manam-pahaizana, mpanelanelana ary mpanazatra. Mo dia nanana traikefa nandritra ny taona 30 tamin'ny famolavolana fikambanana, ekipa ary olona. Niasa tamina sehatra ho an'ny vahoaka, sehatra tsy miankina ary an-tsitrapo izy tao anatin'ny andraikitra sarotra izay mampifanaraka tsara amin'ny asan'ny The Reward Foundation.
Hamantatra bebe kokoa…
Araho ireto rohy ireto mba hahafantarana bebe kokoa momba ny valin'ny Fanamarinana:
Mary Sharpe, Manampahefana Mpanatanteraka
Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana
TRF ao amin'ny Media
Tsy manolotra fitsaboana isika. Manana tolotra fitaterana mailaka izahay.
Ny valin'ny Fanamarinana dia tsy manome toro-hevitra ara-dalàna.
Ny Reward Foundation dia miasa miaraka amin'ny: